]Abahlinzeki be-Silicon Carbide abasebenza ngokungemthetho kanye nabakhiqizi - I-XTLCERAMIC
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Silicon Carbide Elenyukayo
I-Silicon Carbide Carbide ngokuvamile yenziwa nge-silicon eyisilo eboshwe nge-silicon kanye nezinto zokwakha ze-graphite. I-Silicon Carbide Carbide ilungele ukunyibilikisa nokuncibilika kwezinsimbi eziyigugu, izinsimbi eziyisisekelo nezinye izinsimbi esithandweni somlilo. Zisetshenziswa ekushiseni okufika ku-1600 degree celsius.
I-Silicon Carbide Elethelwa inikeza amazinga okushisa afanayo futhi avumelanayo lapho incibilikisa futhi inamandla aphezulu kanye nokumelana nokuqhekeka. Izinga lokushisa elifanayo linikeza insimbi esezingeni eliphakeme ebilisiwe ukuze iphonsele imikhiqizo yensimbi ehlala isikhathi eside futhi enhle.
I-Silicon Carbide Carbide inokuphamba okuhle okushisayo, amandla aphezulu, ukwanda okushisayo, ukumelana oxidal, ukumelana nokushaqeka okushisayo, ukumelana nokushaqeka, ubulukhuni obuphezulu nokugqoka.
Ngenxa yezakhiwo ze-silicon Carbide ebelekile, kuyasebenza emikhakheni ehlukahlukene efana, yamakhemikhali, i-elektroni, i-semiconductor, metallurgy, njll.
Ukucubungula i-Filicon Carbide graphite ebekiwe yokushaya i-aluminium copper aluminium
]Ama-Crucibles ethu e-SIC anika impilo ende, ebiyelwe ngokushesha, isivinini esiguqukayo esiguqukayo kanye nokumelana okuhlukile ekushiseni okunodlame kwamazinga okushisa.I-Xingtailong enobubanzi obubanzi, ikhwalithi enhle, amanani afanele kanye nemiklamo enesitayela, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ukuphindaphindwa, impahla ye-eclecte, i-electrode, imboni ye-athomu, i-atode, i-atode yamandla embonini, imboni yezokuvikela kanye nezinye izimboni. I-Silicon Carbide enobuhlakani futhi isebenza kahle kakhulu, ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo emkhakheni wokukhiqizwa kwezimboni